Kuchengeta Kwega Girazi Bhodhoro, Girazi Chemishonga Bhodhoro, Girazi Jar - Hoyer
Tine mhando dzakasiyana dzemabhodhi emhando yepamusoro!
MAHARA SAMPLES anogona kutumirwa kunoongororwa kwemhando!
Dhizaini yakagadzirwa inowanikwa!
Ndokumbirawo utisiyire meseji kana uine chero mubvunzo, tichakudzosera mukati memaawa masere.
Semhizha uye yekumhanyisa pamberi kumhanyi muChina chegirazi bhodhoro, Hoyer Glass yakanyanya kuita basa rekutsvaga nekugadzira, kugadzira, kugadzira, kushambadzira nekutengesa mhando dzese dzehando dzegirazi repamusoro zvigadzirwa.
Ikozvino, tiri kushanda pane dzakasiyana siyana dzegirazi zvinyorwa nezviuru zvemhando, senge yekuchengeta wega bhodhoro, girazi rewaini bhodhoro, girazi rechinwiwa, girazi jar, yegirazi yemishonga bhodhoro, girazi rechinwiwa bhodhoro uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama.